I-Equip.li-Ukuncedisa abefundisi ngenguqu ngexesha le-COVID-19
Dlulela kwindawo yokuhamba
Dlulela kwikharityhulam engundoqo
Imizekelo efanelekileyo yecawa eku-intanethi
Uyibeka kanjani ividiyo yakho
Ungathetha njani kwikhamera yevidiyo
Iingcebiso zokusebenzisa ifowuni ye-Android ukurekhoda ividiyo
Sesiphi isixhobo sevidiyo esifanele sisisebenzise?
Ukhetho lomculo olusemthethweni
Amakhonkco okungena kwisenzo
Ingxelo kunye nokulungiselela
Ungayibhengeza njani inkonzo ye-intanethi kuphela
Amakhonkco oncedo kwiwebhusayithi
Uluhlu lwembono yevidiyo
Ulungiselelo ngaphandle kweintanethi
Amakhadi okukhumbuza iifowuni
Ukukhuthaza abalingane emthandazweni
Inkonzo ekwi-Intanethi ebantwaneni, kulutsha nakubazali
Iqela lomthandazo lwangeCawa ye-AM
Isixhobo sokulawula iimvakalelo
Isikripti sokubiza iicawe
Isicatshulwa sabefundisi ngexesha le-COVID-19
Ezinye iindlela zokungcwaba
Impendulo kwinqaku le-anti-mask
Uphengululo lwenqaku elichasene nemaski # 2
Ukuncedisa utshintsho lwabefundisi ngexesha le-COVID-19
Ingcebiso kamfundisi-nomfundisi-ntsapho (# 01)
by Shiya Comment
Ndiyithumele le vidiyo kumaqela aliqela endikunye nawo nabaphathiswa. Ndiyaqonda ukuba ayizizo zonke izihlobo zam zenkonzo ezikuloo maqela, ngoko ndiyabelana nazo apha. Yabelana ngale nto kwaye ufake umfundisi wakho. Kuya kumkhuthaza. La manyathelo alithoba wokujongana noku ngokobuqu aya kukunceda, nokuba awungomfundisi. Khawuleza nje uye kumanqaku ali-13. Bendisebenza kwincwadi yam elandelayo (nangona andinampapashi okwangoku). Kukulandelwa ukuya kuthi "Uncedo, ndikwayiNtlawulo" -neengcebiso ezisebenzayo zeenkokheli. Kudala ndibamba izahluko kwaye ndibhala okokuqala.Njengoko bendibhala le sahluko malunga nokukhokelela kwintlekele, ndaye ndagqiba kwelokuba mandingalindi ukuyifunda de ipapashwe incwadi. Endaweni yoko, ndaye ndagqiba kwelokuba ndifundise yona kwividiyo .Yiyo le - ngaphandle kwemiqobo yelungelo lokushicilela.Imizuzu yokuqala eli-13 ziingcinga ezili-10 (kubandakanya ezimbini endizibiza "inombolo 5") ngokukhokela icawe yakho.Imizuzu eli-11 yokugqibela igxile kubuchule bakho ukujongana noxinzelelo kunye noxinzelelo. Ndabelana ngezinto eziyi-9 endizenzayo ukuze ndihlale ndisempilweni, ndindisholo kwaye ndiyinyani ngale ngxaki. Ndithandaza ukuba oku akuncede. Ukuba uneengcinga okanye imibuzo, yenza izimvo apha ngezantsi.QINISEKISA UKUFUNDA: andinguye oyingcali. Ndijongene nazo zonke iimvakalelo ezifanayo kunye noxinzelelo olukuyo. Kwenzeka ukuba ndibhale incwadi njengoko ndijongana nayo. Ezi ziingcamango zomnye ozabalaza. Siza kuyenza ngoku-kunye!
Kuthunyelwe ngu Intonga uLoy ngolwesiThathu, ngo-Epreli 1, 2020
Awunakho ukudlulisela ingxaki. Nxibelelana mihla le.
Khetha umgama wokugqibela ogqityiweyo. (ukhetho luqala ukusukela xa ilizwe livuma ukuya 2022)
Khetha isantya esizinzileyo.
Phatha ikhamera njengomntu (yedwa, onamathela ekhaya); ndishumayeze ikhamera.
Ziqhelise ukuba ngabaphathi. (usike iindleko naphina apho unokufumana khona.)
Nxibelelana nabantu becawe. Fowunela umnxeba.
Cinga ixesha elide. Yeyiphi imikhwa ekufuneka siyenzile? ufuna ukophula?
Ingxaki iza xa usengxakini.
Khangela ukugxila kwangaphandle. (Yabelana ngokutya. Imishini, uhambo lomthandazo, okanye Kaninzi)
Umfundisi uRod Loy emva koko uchitha isiqingatha sesibini sevidiyo (ngenqaku le-13: 00 echaza) zeziphi izinto ezamncedayo wakwazi ukumelana neli xesha le-COVID-19 (intsholongwane kaCorona).
Ufakwe phantsi: Iingcebiso ezikhuthazayo kubaphathiswa
Le yindlela yokuphendula kumanqaku enqaku elichasene nemaski "abantu abaphilayo banxiba imaski, ngaba kufanelekile okanye akufuneki?" nguPatricia Neuenschwander (umongikazi owenza umongikazi), ehlelwe nguJennifer Margulis, PhD (ngesiNgesi) Qala ngamanqaku ka… [Qhubeka nokufunda] malunga noVavanyo lwenqaku elichasene nemaski # 2
Ufakwe phantsi: Akohlulwanga
Amaqela amancinci akude ngokwasentlalweni
Abanye oorhulumente babeka umda kwindlela abantu abanokuthi bahlangane ngayo. (umzekelo. lingabi ngaphezu kwe-10 labantu). Ke nayiphi na icawe inokhetho lokuvumela nabani na kwicawe yakhe ukuba ahlangane kwezi ntlanganiso zamaqela amancinci. Ezi ntlanganiso zincinci ziya kufuneka zibe phakathi kwabantu… [Qhubeka nokufunda] malunga namaqela amancinci akude ngokwasentlalweni
Le yimpendulo kumanqaku enqaku lika-Russell Blaylock elichasene ne-anti-mask, elinesihloko esithi "I-Masks yoBuso ukuBeka umngcipheko oBi kakhulu kuye kwaba seMpilo" okanye "iMaski yoBuso inokubhubha kubantu abaphilayo utsho uNeurologist" ngubani uRussell Blaylock? Asinguye… [Qhubeka nokufunda] malunga nokuphendula kwinqaku elichasene nemaski
Abanye oorhulumente abavumeli ukuhlanganisana kwimingcwabo. Nazi ezinye iindlela zokhetho: Yilahle ikhandlela ngaphandle kwendlela. Umthombo Oku kukuvumela ukuba ube nembhiyozo yenkonzo yobomi ngaphandle kokophula ubhubhane ebalulekileyo… [Qhubeka nokufunda] malunga nezinye iindlela zokuNgcwaba
Ukuvuselela iinkonzo zecawa yokwakha
Abanye oorhulumente sele beqalisile ukuvumela iicawe ukuba zihlangane ekwakheni. Unokufuna ukwabelana nesi sigqibo namalungu ebhodi malunga nokuba ungahlangana njani kwakhona njengecawe kwisakhiwo sakho. Cofa kwimibuzo emi-5 ukuvavanya izinto ezilungileyo kunye… [Qhubeka nokufunda] malunga nokuqalisa ngokutsha ekwakheni iinkonzo zecawe
Khangela le website
Icawe ngevidiyo ekwi-intanethi
Ukulungiselela abantu ngaphandle kwe-intanethi
Isibhalo kwakhona: COVID-19
Misela ividiyo yakho
Impendulo | Ukucwangciswa
Uluhlu lweIdea yeVidiyo
Bantwana, ulutsha, kunye nabazali
Yazisa kwi-Intanethi kuphela
Buyela kumaphepha aphezulu
Copyright © 2020 · I-Equip.li by Amakhadi eenkumbulo zeVangeli · Sitemap · Ngema